Ihe omuma ihe omuma ihe mere e ji lee Mozenda anya dika otu n'ime ihe kacha mma
Nchịkọta data bụ usoro nchịkọta data site na otu ngalaba iji hazie ya n'ime usoro nhazi dika XML, CSV, ma obu TSV. Usoro a dị iche na nbudata data dịka nbudata na-emekarị site n'ịchịkọta data sitere n'ọtụtụ ngalaba.
Mmasị maka ọrụ nchịkọta data na-arịwanye elu n'ihi ọtụtụ uru ọ bara. Ọ bụ ya mere eji mepụta ọtụtụ ngwaọrụ iji nweta ozi ọ bụla na weebụ. N'ụzọ dị mwute, ihe ka ọtụtụ n'ime ngwaọrụ ndị ahụ adịghị ezughị okè ma nwee ọtụtụ nzaghachi. Otú ọ dị, e nwere ngwá ọrụ nwere njirimara ndị ka elu, nke a bụ Mozenda.
Uru nke nchịkọta data
Mozenda nwere ike ikpokọta ozi kọntaktị nke òtù na ndị n'otu n'otu. Idebe ozi kọntaktị dị mkpa maka ụlọ ọrụ ahịa na ndị na-enye ahịa ahịa n'ụwa niile. Na mmepe nke teknụzụ weebụ , ọ dị mfe ịchọ ndị mmadụ na nzukọ iji nye ọrụ na ngwaahịa gị.
Ịnweta ohere ọ bụla na kọntaktị ọ bụla emeela ka ọ dịkwuo nchịkọta listi nzipu ozi, listi email, na ọbụna akara ndepụta. Na mgbakwunye na uru ahụ a kpọtụrụ aha n'elu, e nwere ihe ndị ọzọ iji wepu ozi mgbe nile:
1. Research Competitive: Ụlọ ọrụ wepụ data maka ihe dị iche iche asọmpi. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ nwere ike ịchọ ịma ụgwọ ndị na-akwado ha nyere maka ụfọdụ ngwaahịa na ọrụ.
2. Geotargeting na grouping: A na-ehichapụ data maka mgbasa ozi kwesịrị ekwesị. Ọ na-eme ka ụlọ ọrụ na-agba ọsọ maka mgbasa ozi ahịa na-eweta ọnọdụ ma si otú ahụ mee ka mgbalị ahịa ha na-abawanye uru. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ na-agba ọsọ na Dayton, Ohio kwesịrị iziga ndị bi na Dayton ozi ahịa. Iziga ha na ndị obodo Cincinnati agaghị arụ ọrụ nke ọma ebe ọ bụ na ọ gaghị abụ na onye ọ bụla ga-eme njem ahụ dị nso iji nweta ụfọdụ ọrụ spa.
3. Mgbasa ozi ahịa: Dịka e kwuru na mbụ, ịkwesịrị ịnweta ozi iji wuo nchekwa data nke ndị na-ege ntị.
4. Nchịkọta ederede: Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ chọrọ iji ọrụ onye ọkịkpe, ọ ga-enyocha akwụkwọ ndekọ ndị ọka iwu ka ha nwee ike ịchọta ụfọdụ ndị ọkàiwu nọ na obodo ahụ.
5. Nyochaa ndi otu n'otu na ndi oru ahia: Mgbe icho onye ozo n'oru ahia ma obu onye na enye oru, nbudata data nyere ndi oru aka nyochaa ndi ozo. Ọ bụrụ na ịnwere ike ịnweta ozi banyere ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye ọ bụla, mgbe ahụ i nwere ike inyocha ha na-anọghị na ya.
Ihe mere Mozenda
software Mozenda nwere ike wepu data ị chọrọ n'oge ma ọ bụ na-achọ. E mere ya iji mee ka ndị ọrụ nyocha ngwa ngwa ntanetị weebụ. Mozenda na-eji teknụzụ ntụgharị ihe nchọgharị mee ka ọ dị ka ezigbo onye ọrụ.
Uru nke ịkọ onye ọrụ bụ:
Ọ nwere ike ịnyagharịa site na ibe weebụ dị elu
) Ọ na-ebu ibu ma na-agagharị na peeji nke dịka ihe nchọgharị
Ewezuga inwe ike ịme ndị ọrụ, Mozenda na akwado nkwado dị ukwuu 24/7, na ngwugwu ya na ụfọdụ obere vidiyo maka ndị ọrụ ịmụta otú e si eji ngwá ọrụ ahụ eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Vidio vidio dị mkpirikpi bụ:
Esi eweghara ederede. Nke a na-ewe naanị 43 sekọnd
Olee otú ị ga-esi na-arụ ọrụ na peeji nke ọzọ. Ọ na-ewe oge nkeji na nkeji 58
Otu esi etinye usoro ihe omume iji na-agba ọsọ mgbe niile. Oge maka nke a bụ nkeji na 8 sekọnd
Otu esi ejikọta data sitere na ubi abụọ. Ọ na - ewe naanị nkeji 1 na nkeji 16
N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na Mozenda nwere ọtụtụ atụmatụ, ihe kachasị mkpa mere ị ga-eji nwaa ya bụ ikike ya iji wepu ebe nrụọrụ weebụ siri ike Source .